News | Narinepal | Page 2
सेक्स मामिलाले वहालवाला मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पत्नीको चर्तिकलाको यथार्थता
वहालवाला मन्त्रीको श्रीमतीलाई अपुग के होला? उत्तर सजिलै आउन सक्छ, अपुग केही हुन्न। हुन पनि हो, क्षमता, विवेक, बुद्धी, शिष्टतालाई भन्दा तडक भडक, ढोंग, पाखण्ड देखाउनेलाई बढी सम्मान गर्ने हाम्रो जस्तो समाजमा मन्त्रीको पत्नीलाई शक्ति सान, सौकत सबै उपलब्ध नहुने कुरै रहेन। तर, यी सबै चिज उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि स्थानिय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निवर्तमान श्रीमती योगमाया बन्जाडे ‘सिमा’ ले मन्त्री श्रीमानलाई नै छोडेको घटनालाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न। रायमाझी र उनको कौशलबाट प्राप्त वैभवलाई बन्जाडेले किन परित्याग गरिन? बन्जाडेले आरोप लगाए जस्तै रायमाझीले यौनतुष्टी पुरा गरिदिन नसकेकोले मात्र उनी ‘पोइला’ गएकी हुन? वा यसभित्र लुकेका कारणहरू अझ गम्भिर छन्? खोजीनीति सुरु हुनु स्वभाविकै हो। किनभने यस काण्डले रायमाझीको राजनीतिमा ग्रहण लाग्ने निश्चित छ।
कसले सिकाउन पर्दैन नेपाली बिधार्थी लाइ यौन कार्य गर्न
काठमाडौं, १२ भदौ । यी तस्बिर कुनै अश्लील फिल्मका होइनन् । नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोटका स्कुले केटाकेटीले ‘रियालिटी’ मै यस्तो तमासा देखाएका छन् ।
युट्युबमा राखिएको एउटा भिडियोबाट यी तस्बिर साभार गरिएका हुन् । यो भिडियो दुई दिनमा २५ हजारभन्दा बढीले हेरेका छन् । भिडियोमा स्कुल पढ्ने उमेरका एक हुल केटाकेटी जोडी–जोडी भएर ‘टङ किस’ मा लिप्त रहेको देखिन्छ । घोर कलियुग †
गैँडाकोटका उच्छृंखल बालबालिकाहरूले खोलामा गएर ‘चुम्बन प्रतियोगिता’ गरे र त्यसको भिडियो पनि खिचाए । त्यसो त भिडियो खिच्ने व्यक्ति भने बढी
“किस खाने विद्यार्थी हाम्रा होइनन्” (with video)
काठमाडौ : नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित रानीखोलामा सामूहिक चुम्बन खाने चार जना विद्यार्थी स्थानीय सरस्वती निकेतन विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी भएको पुष्टि भएको छ । चार जोडी विद्यार्थीले सामूहिक चुम्बन गरिरहेको भिडियो यु–टयुबमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
सरस्वती निकेतनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस घटनामा विद्यालयको नाम मुछिएकोप्रति दु:ख व्यक्त गरेको हो । विद्यालयले घटनामा संलग्नमध्ये कुनै पनि विद्यार्थी हाल अध्ययनरत नरहेको जनाएको छ । ‘चार जना केही पहिलेका विद्यार्थी हुन्, अरू वरिपरिका विद्यालयका छन् तर हाम्रो नाम जोडेर प्रचारबाजी भएकोमा हामी दु:खी भएका छाँै,’ सरस्वती निकेतनका प्रिन्सिपल भरतबन्धु कँडेलले भने ।